Manandratra Ny Fiderana Ilay Vehivavy Tsy Azo Nohozongozonina i Shina · Global Voices teny Malagasy
Manandratra Ny Fiderana Ilay Vehivavy Tsy Azo Nohozongozonina i Shina
Voadika ny 10 Avrily 2013 23:52 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, Ελληνικά, Nederlands, English
Samy manindrahindra daholo an'ilay Praiministra Britanika fahiny Margaret Thatcher na ny mediam-panjakana Shinoa na ny media sosialy. Maty ny 8 Aprily 2013 teo amin'ny faha-87 taonany izy, taorian'ny tsy fetezana tany amin'ny lohany.
Thatcher, izay tonga teo amin'ny toerany tamin'ny 1979, no vehivavy mpitarika voalohany indrindra an'i Angletera sy vehivavy voalohany nifehy firenena tandrefana matanjaka. Nandritra ny 11 taona naha-praiminisitra azy, nahavita nampitsimbadika ny toekarena britanika izay tsy niroso tsy nihemotra ity politisiana mpifikitra amin'ny nentin-drazana ity, namparefo ny tanjak'ireo sendikà, ary nahatsinjo mialoha ny fandresen'ny Britanika nanoloana an'i Arzantina tamin'ny Falklands War (Ady tao Malouines).
Tsy iraisana anefa ny lova navelany. Raha toa ireo mpomba azy midera azy amin'ny nahatafaverenany an'i Angletera ho isan'ireo firenena matanjaka sy nahafehy ny fitontonganam-bola, ireo mpanakiana kosa manipika ny hamaroan'isan'ny tsy fananana asa nandritra ny fotoam-pitondràny sy miampanga ny fanavaozany hisian'ny tsena malalaka ho nampitombo ny hantsana eo amin'ny mpanankarena sy ny mahantra.
Raha toa ka niteraka fihetsehampo mifamahofaho manerana izao tontolo izao ny nahafatesany, ny mediam-panjakàna Shinoa kosa nanokana fotoana sy hàbaka manokana hanindrahindràny an'i Thatcher.
Beijing News niantso [zh] an'i Thatcher ho “Vehivavy Henjana Tsy Hay Hozongozonina.” Southern Metropolis Daily nitanisa zh] tenin'i Thatcher: “Any amin'izay misy tsy fitovian-tsaina, hoentintsika any ny firindràna. Any amin'ny misy diso, hoentintsika any ny fahamarinana. Global Times nanipika ny anjara andraikitra goavana notànany tamin'ny famindràm-pahefana tany Hong Kong tamin'ny 1984:
Vitan'i Thatcher ny nahatakatra hoe tsy Arzantina akory i Shina ary Hong Kong tsy toy ny any Falklands (Malouines). Nanao sonia ny fanambaràna niombonana izy, izay nametraka ny fototry ny fiverenan'i Hong Kong….Manana ny antony izahay hanehoanay ny fanajàna an'io vehivavy io izay nanao sonia ny Fanambaràna Niraisan'i Shina sy Angletera.
Ao amin'ny sehatra Shinoa malaza indrindra fitorahana bilaogy kiritika, Sina Weibo, lasa laharana faharoa amin'ireo lohahevitra resahana be indrindra tamin'ny andron'ny 9 Aprily ny fahafatesan'i Thatcher [zh] miaraka amina fifanakalozan-dresaka maherin'ny 449.155. Ireo fanehoankevitra miabo faran'izay nibahan-toerana indrindra dia mampiseho fa ny fahalalana an'i Thatcher ho an'ny sasany amin'ireo mpampiasa tranonkala dia voafetra fotsiny ho avy amin'ilay lahatsary Britanika somary fampahafantarana ny ny mikasika ny fiainan'i Iron Lady sy ny anjara toerana notànany tamin'ny famerenana an'i HK ho an'i Shina.
Zhang Xin, Tale Jeneralin'ny SOHO, orinasa Shinoa mpanome tolotra aterineto , nanoratra [zh] tao amin'ny Weibo hoe:
Vao avy nandre ny vaovao momba ny fahalasanan'ny praiminisitra teo aloha, Rtoa Thatcher. Fony aho nianatra tany amin'ny kolejy tany Angletera, ny seho tanaty fahitalavitra tena nankafiziko dia ny resadresaka fanaon'i Thatcher ao amin'ny antenimiera. [Izy dia] tena vehivavy tsy azo nohozongozonina.
Ilay poeta malaza, Chen Zhaohua, dia nanandratra [zh] ny fandavan-tenan'i Thatcher hisian'ny tsena malalaka izay nanova ny toekarena tao Angletera :
Nomena anaram-bositra hoe “Iron Lady – Vehivavy tsy azo hozongozonina,” tonga teo amin'ny fitondràna izy tamin'ny 1979 ary nametraka ny fanavaozana midadasika ny tsena mitodika amin'ny fisintahan'ny fanjakana ary ny tsy fitsabahana be loatra, ka tamin'ny alalan'izany no nialàn'i Angletera avy amin'ny toeran'ny “lehilahy osa” tao Eoropa taorian'ny Ady Lehibe II ho amin'ny toeran'ny firenena tena mavitrika indrindra any Eoropa aorian'i Alemana.
Toy ny tsy miandany izany ny fanamarihan'i [zh]Lian Peng, mpanoratra :
Ny olona sasany mihevitra fa [Ronald] Reagan sy Thatcher dia samy nandevina ny fo-mba fisainan'ny kapitalisma taorian'ny ady ary namboly voa ratsy. Ny sasany midera ny fomba fitondrany sy ny fanaony mifototra amin'ny asa sy ny zava-misy tamin'ny fikatsahany izay tombontsoa ho an'ny fireneny. Mandeha ho azy ny fanànana fomba fijery samihafa mikasika azy raha zoro samihafa no ijoroana. Araka ilay fomba fiteny fahizay hoe: “An-tapitrisa no maty mba hahatonga an'i Kaisara ho be voninahitra.” Ao ambadiky ny fahombiazan'ny politisiana iray miavaka amin'ny maro, misy zava-tsy manjary maro mifangaroharo ao. Aza fafàna noho izay zava-tsy nanjary tany ny fahombiazan'izy ireny, ary ny fahombiazan-dry zareo ihany koa tsy ho afaka hanakona ny ratsy vitany. Ny zava-dehibe dia ny fisaintsainana ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany.
Nanely izany i “Yingzi” , mpampiasa tranonkala:
Filozofika loatra. Iray amin'ireo vehivavy deraiko izy, vitsy ny vehivavy mahatratra ny toerana misy azy. Nolaviny ny hametraka voninkazo teo amin'ny Tsangambato Ho an'ireo Maherifon'ny Vahoaka, izay maneho ny fihenjanan'ny fomba fitondràny amin'ny maha-vehivavy tsy azo hozongozonina azy. Kanefa, mikasika ny famerenana an'i Hong Kong ho an'i Shina, nanondrika ny lohany be rehareha iny izy.
Na izany aza, ny sasany amin'ireo mpampiasa tranonkala no nihevitra fa ny lazan'i Thatcher dia avy aiza fa azony avy amin'ny famerenany an'i Hong Kong ho an'i Shina. Ny lehiben'ny Mozea Shinoa momba ny resa-bola, Wang Wei, nanoratra [zh] hoe:
Niresaka taminà vahiny avy any Pays-Bàs sy Frantsa aho momba ny fahafatesan'i Thatcher, sahala amin'ny tsy mahataitra an-dry zareo. Manontany ry zareo ny amin'izay antony mahatonga ny fientanentanana be eo amin'ny Shinoa. Heveriko fa noho izy namerina an'i Hong Kong ho an'i Shina.
Ny talen'ny famoahan-dahatsoratry ny The Wall Street Journal any Shina, Yuan Li, namintina [zh] hoe:
Nodimandry i Margaret Thatcher. Fifarananà vanim-potoana iray. Miaraka amin'ireo governemanta maro tsy mbola afaka amin'ny fitsabatsabahana, azo antoka fa nahavaky fo azy izany.